Fifidianana · Jona, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Jona, 2012
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Jona, 2012
Ejipta: Mohamed Morsi No Filoha Vaovaon'i Ejipta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Jona 2012
Mohamed Morsi no voatendry ho filoha vaovaon'i Ejipta. Tsindrian-daona ireo mpiondana aterineto miandry izay ho fanambaran'ilay filohan'i Ejipta manaraka.
Afrika Mainty 20 Jona 2012
Nivadika ho fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ny diabe iray am-pilaminana nataon'ny fiaraha-mientana "Ndeha hovonjena i Togo" tamin'ny 12 Jona teo. Nanodidina ny 120 ireo naratra voarakitra an-tsoratra nandritra ireo fifandonana ny 12 sy 13 Jona. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny fitakian'ireo nanao fihetsiketsehana ny fampiharana ny zava-boalazan'ny Kaomisionam-pirenena momba ny Zon'Olombelona mikasika ny fampijaliana sy ny fanavaozana ifotony ny Lalampanorenana. Ankehitriny i Togo dia anaty tetezamita politika taorian'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny 2005 nolavin'ny betsaka ka nahatonga ho eo amin'ny fitondrana an'i Faure Gnassingbé Eyadema, zanaky ny filoha teo aloha Gnassingbé Eyadema. Misy fihetsiketsehana iray nomanina hatao ny 18 Jona.
Ejipta: Fihodinana Farany Amin'ny Fifidianana Ho Filoham-Pirenena An-Tsary
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 Jona 2012
Ny 16 Jona, nantsoina hifidy ry zareo Ejiptiana, amin'ny fihodinana faharoa izay ho filoham-pirenena [...] tena mampanaintaina na dia ny hisafidy amin'ny mpirotsaka avy amin'ny Firahalahiana Silamo, Mohamed Morsi sy ny Praiminisitry ny fitondrana teo aloha, Ahmed Shafiq az
Ejipta: Milaza Fandresena Ny Mpirotsaka Ho Filoha Avy Amin'ny Firahalahiana Silamo
Nanambara i Mohamed Morsi, mpirotsaka avy amin'ny Firahalahiana Silamo, fa izy no nandresy tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Ejiptiana, nandresy an'ilay praiminisitr'i Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, nandritra ny resaka ho an'ny mpanao gazety nataony tamin'ny 4 maraina tao Cairo ny 18 Jona
Bahamas: Famakafakàna Bilaogera Momba Ny Valim-pifidianana
Karaiba 11 Jona 2012
Ny valim-pifidi-anana ankapobeny ny alatsinainy teo tany Bahamas no nanome governemanta vaovao ho an'ny firenena : ny Antoko Mirona Liberaly (Progressive Liberale Party na PLP), izay nipetraka tamin'ny toeran’ny mpanohitra tao amin’ny parlementa teo aloha, no voafidy ho eo amin’ny fahefàna, izay antsoin’ireo bilaogera hoe fandresena fikorisan'ny tany [goavana] . Nanao tomba-maso vetivety...
Ejipta: Dokam-pitsikilovana Tsy Mampino Avy Amin'ny Fahefana Miaramila
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Jona 2012
Namoaka dokambarotra ny fahitalavi-panjakana ao Ejypta, izay mampitandrina ny Ejypsiana tsy hiresaka amin'ny vahiny sy ny mpitsikilo. Naneho hevitra momba izany dokambarotra izany ny mpiserasera, tamin'ny fomba feno esoeso, ahiahy.
Amerika Latina 10 Jona 2012
Ejipta: Tsia, Tsy Mbola Vita ny Revolisiona
Nitodika tany amin'ny Ejipta indray ny mason'izao tontolo izao tamin'ny 23 sy 24 May, noho ity firenena ity hanao ny fifidianana filoham-pirenena voalohany taorian'ny firohotam-bahoaka izay nanàla an'i Hosni Mubarak herintaona sy tapany lasa izay.
Kambodza: Tsy Nisy Fahagagana Nandritra ny Fididianana Ben'ny Tanàna
Azia Atsinanana 08 Jona 2012
Fifidianana fahatelo amin’ny fe-potoa-piasan’ny Filankevi-monisipaly ao Kambodza ny fifidianana ben'ny tanàna notontosaina tamin’ny Alahady 3 Jiona lasa teo, izay manana fe-potoa-piasana 5 taona. Napetraka ny fampiharana ny firafitry ny Filankevi-monisipaly mba hampiroboroboana ny fitsinjaram-pahefana eo amin’ny resaka fitantanana sy mba handraisana fanapaha-kevitra manakaiky ny vahoaka. Tamin’ny taona 2002 sy 2007...
Amerika Latina 03 Jona 2012
Nanamarika ny fitsidihana nataon'ny kandida ho filoham-pirenena Enrique Peña Nieto tany amin'ny Anjerimanontolon'i Iberoamericana ny hetsi-panoherana nataon'ny mpianatra izay efa imbetsaka no nitsipaka ilay kandida. Izy ity, niaraka tamin'ny vaovao mitanila navoakan'ny haino aman-jeriy tamin'izany fotoana, no nanjary fangaronà vanja mipoaka, izay nivoaka voalohany tao amin'ny haino aman-jery sosialy, ary ankehitriny maka ny heriny eny an-dalambe any amin'ireo tanàna lehibe Meksikana.